यो एक साधारण विश्वास छ मानव मस्तिष्क जन्म तरिका खाली छ, र बढ्न र उत्तेजना प्राप्त गर्न बच्चा सुरु रूपमा, को न्यूरन्स कनेक्शन बनाउन सुरु. विज्ञान अब खोजी छ, तथापि, उल्टो साँचो हुन सक्छ कि. शिशु वास्तवमा भन्दा वयस्क छ भन्दा धेरै neuron कनेक्शन संग जन्मिएको छ. यो सिक्ने neuron जडानहरू गरेर हुँदैन भनेर हुन सक्छ, बरु ती बाहिर weeding प्रयोग नगरिएका. यदि यो सत्य हो, त्यसपछि हामी सबै हो, शाब्दिक, शानदार मन संग जन्म र हामी यसलाई प्रयोग गर्न वा यसलाई गुमाउन पर्छ.
जीवनको पहिलो हप्तामा, सबैभन्दा बच्चाहरु कल्पना हरेक सम्भव ध्वनि babble हुनेछ. यद्यपि, यी बच्चाहरु पछि हुन् भनेर तिनीहरूले बोल्न प्रशिक्षित गरिएको छ भाषा को भाग ध्वनि सिर्जना गर्ने क्षमता गुमाउनु हुनेछ. त्यसैले, बच्चाको वातावरण मस्तिष्क विकासमा एउटा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ.
मूल आंकडा पौराणिक कथा पछि: को चिरकाल imaged pyramidal neuron "ल" समावेश Coronal खण्ड (हरियो Gfp द्वारा भिजुएलाइज्ड) GABA लागि दाग छैन (रातो मा एंटीबडी staining द्वारा भिजुएलाइज्ड). Confocal छवि थाक, Gfp र GABA च्यानलहरूको ओभरले. स्केल पट्टी: 100 μm (फोटो क्रेडिट: विकिपीडिया)
वैज्ञानिकहरूले हाम्रो समाजमा औसत व्यक्तिगत प्रयोग मात्र दावी5– 10% को मस्तिष्क गरेको सम्भावित. आफ्नो जीवन तपाईं प्रोत्साहित गर्न सके भने जस्तै हुन सक्छ के कल्पना आफ्नो मन भनेर प्रयोग नगरिएको क्षमता पनि एउटा सानो भाग सक्रिय मा!
आफैलाई सोधेर द्वारा सुरु:
1. म सबै केहि हुन सक्थ्यो भने, यो के हुनेछ?
2. म यसलाई हासिल गर्न के गर्नुपर्छ के?
3. के अब ती कुराहरू गर्नदेखि मलाई रोक्छ?
4. म इच्छा जीवन म कसरी ती चुनौतीहरूको जित्न सक्नुहुन्छ?
यी प्रश्नहरूको हामीलाई realms कदम कल्पना र सकारात्मक सोच — तपाईं अन्य जगाउन गर्न अनुमति दिन्छ कि गुणहरू 90% र फायर ती न्यूरन्स राख्न!
अब तपाईं आफैलाई भन्न सक्छ, द्वितीय पहिले नै सकारात्मक मनोवृत्ति, वा, सायद त्यो सकारात्मक सामान काम गर्दैन — willpower म आवश्यक सबै छ तर निम्न प्रदर्शन कल्पनाले धेरै शक्तिशाली willpower कहिल्यै हुन सक्छ भन्दा छ भनेर प्रमाणित.
ल, परीक्षण लागि तयार? भेला आफ्नो बल को सबै र “willpower।” यो एक रातो को लाग्छ आउछ छैन यहाँ निम्न गर्न निश्चित हुन firetruck!!
तपाईं स्वतः लाग्यो रातो firetruck को, ठिक? किनभने इच्छा र कल्पना द्वन्द्वमा हुँदा यो छ, कल्पनाले सधैं जीत. अधिकांश मानिसहरू आफू बताउन तिनीहरूले चाहनुहुन्छ के समय को एक महान सम्झौता खर्च, बरु चाहनुहुन्छ के को.
पनि willpower हरेक औंस तिनीहरूले बटुल्न सक्छौं, तिनीहरूले कुनै तरिका नै पुरानो कुरा बढी अन्त.
Thats मन तस्वीर काम किनभने, छैन शब्द. कल्पना जीवनको रहस्य संघटक छ. मानिसहरू आफू धनी कल्पना भने, तिनीहरूले छ पैसा को मात्रा बिना, संभावना तिनीहरूले हुनेछ छन् स्वस्थ र बलियो र एक प्रशस्त जीवन बिताउन.
एक धनी मानिस आफूलाई गरिब वा आफ्नो भाग्य खोने को कगार मा imagines भने, यो समस्या र रोग को गम्भीर गर्न फैल हुनेछ संभावना छ.
हामी जीवनमा खोज्ने छन् भन्ने सबै पहिले नै आफूलाई भित्र उपस्थित. यो ढिलो हामी हाम्रो आफ्नै कल्पना शक्ति विश्वास आउन, यो सजिलो हाम्रो जीवन हुनेछ. म आफ्नो वर्तमान आकांक्षाहरूले परे उपलब्धि को संभावना आफ्नो मन सुत्छन् तपाईं चुनौती.
के भने, आफ्नो लक्ष्य पुग्न एक प्रयास मा, तपाईं भित्र शक्तिशाली latent प्रतिभा जागा? यदि तपाईं लागि उपचार फेला कस्तो महसुस एड्स वा क्यान्सर? आफ्नो उपलब्धि लाभ उठाउन गर्ने मान्छे को विचार.
यो वास्तविकता छ कि सम्म ग्रह सबैले सबै लागि स्वास्थ्य र जाँगरको संसार imagines, त्यहाँ सधैं रोग र धिक्कार हुनेछ. अब आफ्नो जीवनको शुल्क लिन. स्वास्थ्य र आनन्द आफ्नो बाटो कल्पना र यो यति हुनेछ.
चूहहरुमा प्रकाश प्रत्यारोपण को एक फ्लैश झूटा सम्झनाहरु
अध्ययन: जीवशास्त्रीहरूको झूटा सम्झनाहरु प्रत्यारोपण गर्न माउस दिमाग हेरफेर
79659	62 मस्तिष्क, स्वास्थ्य, मानव मस्तिष्क, कल्पना, मन, Neuron, Susumu Tonegawa, लाग्यो
← मिश्रको Morsi र्याली मा संघर्ष मृत्यु दर्जनौं कफी आत्महत्या जोखिम कम गर्न सक्छ पिउने! →